NYC fifanakalozana Genesis mandray BitLicense
Genesisy Global Trading efa mahazo BitLicense avy any New York ny toe Department of Financial Services (DFS), manao izany ihany ny fahadimy mafy tao anatin'ny telo taona mba handray ny fahazoan-dàlana mampiady hevitra.
Ny fifanakalozana avo manjohy ny aterineto sy ny rafitra mpampiasa vola manan-danja sy ny tolotra 24/7 varotra in Bitcoin, Litecoin sy ny hafa.
Network tselatra maniry matanjaka kokoa
Network ny tselatra mitombo. Ny isan'ny nodes dia nitombo tao anatin'ny telo volana, tahaka ity sary mampiseho izay mampitaha Febroary 2018 ho May 2018.
Io modely maneho ny isan'ny nodes izay mety ho lasa lasibatra na nanaiky lembenana sy ny Boky fanoherana ity, manondro ny % ny tambajotra izay mbola miasa, mampiseho ny fitomboan'ny Boky fitsinjaram- pahefana tena.
Ny marimaritra iraisana dia ny tselatra Network dia nitombo sy nohatsaraina tamin'ny Febroary ho May.
Sberbank Vita Rosia fatorana voalohany barotra mampiasa blockchain
Sberbank banky Rosiana sy ny fifandraisandavitra hentitra MTS no nitarika ny zavatra lazainy no firenena voalohany nanao raharaham-barotra fifamatorana ara-barotra amin'ny fampiasana blockchain.
Talata MTS nanambara fa efa nametraka ny famatorana ara-barotra 750 tapitrisa robla ($12.11 tapitrisa), amin'ny mpividy voalohany ho Sberbank, fampiasana ny format manan-tompo blockchain sehatra omen'ny National Settlement Depository.
Andrey Kamensky, VP ny bola, ny fampiasam-bola sy ny M&A ao amin'ny MTS, naneho hevitra fa ny raharaham-barotra mahomby blockchain dia nentina nivoaka ny alalan ' “ponenana iray manontolo rojo, amin'ny fametrahana filaminana sy ny vola fandraisana ho tanteraka ny adidy rehetra ho an'ny mpampiasa vola.”
Next Post:Ahoana no iray mialoha ny fitondran-tena ny tahan'ny ny cryptocurrency eo amin'ny lafiny ny isan'ny didy napetraka?
Mey 22, 2018 amin'ny 1:50 AM
Mey 24, 2018 amin'ny 9:43 PM
Jona 17, 2018 amin'ny 6:16 PM